Waba ngumfazi wesibini owayengumama uKim Kardashian
Kungekudala, i-Olympic iqhawe lika-Olimpiki lika-1976 le-decathlon. U-Caitlin Jenner owazalwa ngokutsha akazange ahlale ekhaya kwaye waqala ubomi obusentlalweni. Ngokubonakala kwakhe okutsha, uBruce owayesebenzileyo sele esele wenza i-globble yakhe kwifashthi yefashishini, kwaye ngasekupheleni kukaJulayi, into ebonakalayo entsha ibonisa ukuba mna Ndiyakhela enye yeendlela zaseMelika, apho uya kuba ngumlingiswa obalaseleyo.
Kucingelwa ukuba kwi-teleproject i-Caitlin iya kuthetha nabathengi kuyo nayiphi na imixholo yobomi, eyona nto iya kuba yiengxaki zekhaya ezavela emva kokuba abathandekayo befunda malunga nesigqibo sikaJenner sokusukela kumntu ukuya kumfazi.
Kwesinye isiqhelo kwiprojekthi yeKardashian Family, intombi encinane kaBruce Kylie yavuma ukuba kwakunzima kangakanani kuye ukuba samkele isigqibo sikayise sokuba ngumfazi. Nangona kunjalo, ngokucacileyo, uyise nentombi ekugqibeleni baxolelana: uKaitlyn usandul 'uthumele umyalezo kuKylie, apho athembise ukuba uya kuba nguyise, kwaye ekuhambeni kokutsha kukaJenner babeza kubakho kunye.
UCaitlin Jenner: Kwenzeka njani konke
Kwikhutshana lokukhupha i-future show show, uKaitlin watshela abaphulaphuli ngokucacileyo ngezizathu ezamshukumisela ukuba enze yakhe inkqubo. Ngokutsho kuka-Miss Jenner, uya kuzama ukuxubusha inkqubo yakhe kwabanye ngezinto awayejamelene nazo, kwaye yintoni awayeyilwa nayo xa eqonda ukuba uyinyaniso-ukuba ngumfazi.
Ngexesha lokwenyani kubonisa uKaitlin uza kujongana nemicimbi eyahlukeneyo "yabasetyhini": ukulungiselela ukuthenga, ukuhamba ngesithuthuthu, njl.
Ngomdla omkhulu kwi-teleproject ingagwetywa ngabantu abayizigidi ezingama-2.3, nje ezimbalwa kwiiveki emva kokusayina i-Instagram Kaitlin Jenner.
Ividiyo entsha yeNdodana kaSergei Lazarev yenza ingxoxo malunga nomama wengane
U-Ekaterina Klimova uxolise kwi-Instagram ababhalisile kwiintengiso
Imfazwe yama-burgers: "u-Peterburger" uSergei Bondarchuk ufumana ukuthandwa kwe "Black Star Burger".
Usapho uJeannene Friske ukususela ngosuku lokuqala akazange athathe uShepeleva
Ukunciphisa ubunzima u-Olga Buzova ujabulisa abahlobo bakhe ngengoma entsha, ividiyo
Iinzuzo zamafutha ebusweni nasemzimbeni
Umdaniso wamaNdiya - inhlanganisela yobugcisa kunye nobuchule
Iklabishi ihamba nge inyama
Indlela yokufunda ukuba yi-bitch
Umba wezemali kwintsapho
Indlela yokuphendula abazali kubafundi besikolo